भिडियो – Online Palanchok
कास्की । पोखराको लेकसाइडमा १४ बर्षीय एक बालकको हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन्। उक्त घटनमा संलग्न वेनी काले भन्ने व्यत्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । श्रोतका अनुसार उनी उक्त घटनामा संलग्न हुने मुख्य व्यत्ति हुन्। प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा अन्य केहीलाई नियन्त्रमा लिएर सोधपुछ समेत गरिरहेको छ । मादक पदार्थ सेवन गरेर सामान्य विवाद पछि हत्या भएको बताइएको छ । पाल्पा स्थायी घर भइ लेकसाइडमा बस्दै आएका सचिन सिन्जालीको हल्लनचोकमा निमार्णधिन अबस्थामा रहेको एक भवन भित्र मंगलबार उनको हत्या भएको हो । बालकका बाबु गोबिन्द सिन्जालीले लेकसाइडकै शान्ति पाटनमा फ्रेसहाउस संचालन गर्दै आएका छन् । बाबु गोबिन्दले बालक प्राय उनकी आमासँग हल्लनचोकमा बस्ने गरेको र दिनको एक पटक आफ्नो पसलमा आउने गरेको बताए ।
काठमाडौं । चलचित्र क्षेत्रमा कलाकारहरु प्रेम सम्बन्धमा बाँधिने कुरा कुनै नौलो होइन तर प्रेम सम्बन्धबाटै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने जोडी निकै कम छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा धेरै कलाकारहरु प्रेममा बाँधिने र छुट्टिने क्रम चलिरहँदा लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा बाँधिएका प्रेम जोडी नायिका बर्षा रावत र संजोग कोइरालाले इंगेजमेन्ट गरेका छन् । प्रेम सम्बन्धको बारेमा मिडियामासमेत खुलेर कुरा गर्ने यो जोडीले सोमबार काठमाडौंमा रहेको एक चार तारे होटेलमा इंगेजमेन्ट गरेका हुन् । उनीहरुको इन्गेजमेन्टमा मिडियालाई भने निम्तो थिएन। परिवारका सदस्य र निकट साथीहरुको जमघटमा इन्गेजमेन्ट सम्पन्न भएको नायिक बर्षाले डिसी नेपाललाई जानकारी दिइन्। नायिका बर्षा र व्यवसायीसमेत रहेका संजोगले इंगेजमेन्टको तयारी आफ्नो अफिसियल फेसबुकमार्फत जानकारी गराएका थिए। उनीहरुले फागुन २ गते प्रेम दिवसका दिन विवाहको मिती जुराएका छन्
काठमाडौँ। ‘नाइँ नभन्नु ल–५’बाट चर्चामा आएकी बालकलाकार सेड्रिना शर्मा अहिले अध्ययनको लागि भारतमा छिन्। उनले भारतको मसुरीमा कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्नेछिन्। ‘नाइँ नभन्नु ल’ को सुरुवात देखिनै ब्रान्ड बनेका अनुभव रेग्मी तथा यही सिरिजबाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरेकी सेड्रिनाको जोडीलाई दर्शकले निकै मन पराए। उनीहरूको जोडीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै राम्रा प्रतिक्रिया आएका थिए। यसैबीच सेड्रिनाले नेपाल आइडलको टप ८ बाट बाहिरिएका प्रतिस्पर्धी कृशल कँडेलसँग म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन्। एक युट्युब च्यानलमा दुवै एकसाथ अन्तर्वार्तामा आएपछि धेरैले जोडी जमेको भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए। हेर्नुस् उनीहरूसँग 'रमाइलो छ'ले केही समय अगाडि गरेको कुराकानी।
काठमाडौँ । नायक सौगात मल्ल र नायिका वर्षा राउत मुख्य भूमिकामा रहेको नेपाली फिल्म ‘मेरो पैसा खोई’ को सानो अंश युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ । रेडान सिने आर्टस् द्वारा प्रायोजन गरिएको फिल्म ‘मेरो पैसा खोई’ को १५ मिनेट २७ सेकेण्डको छोटो अंश बुद्धा सुब्बा डिजिटल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । फिल्ममा वर्षा राउतले यौनकर्मीको भुमिका निभाएकी छन् । छन् जुन उनको फिल्म करियरमा बिल्कुलै नयाँ भूमिका रहेको छ । यस फिल्ममा सौगात र वर्षाका अलावा छुल्ठिम गुरुङ, सागर तिवारी, कमलमणी नेपाल, बुद्धी तामाङ, प्रमोद अग्रहरी र रविन तामाङ लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ ।फिल्ममा हरि घले लामाको छायाङ्कन, सुवास देवकोटाको सम्पादन, कमल राईको कोरियोग्राफी रहेको छ । उमा केसी निर्माता रहेको फिल्ममा रुपक राना र रुपम राना सह९निर्माताको रुपमा रहेका छन् ।फिल्मलाई रोज राणाले निर्माण र निर्देशन गरेका हुन् ।
केहि दिन अघि मात्र रवी लामिछानेसंग बिवाह गरेकी निकिताले एकाएक गरिन अचम्मको निर्णय
काठमाडौँ, – चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष निकिता पौडेलले आज आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । पौडेलले बुधबारदेखि लागू हुने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले बुधबारदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएकी हुँ ।” पौडेलले आफूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको र आगामी दिनमा समाज सेवामा समर्पित हुने बताउनुभयो । उहाँ २०७४ साल मङ्सिर २५ गते बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको थियो । पौडेलले पहिलो पटक बक्स अफिस प्रणालीको शुरुआत गरेको र अन्य केही सकारात्मक कामको समेत थालनी गरेको आफ्नो राजीनामापत्र उल्लेख गर्नुभएको छ ।
गोरखा– अब २५ वर्ष उमेर ननाघेका मगर युवालाई मदिरा पिउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नेपाल मगर संघले जिल्ला÷जिल्लामा रहेको समितिलाई उक्त अभियानलाई सफल बनाउन अनुरोधसमेत गरेको छ। युवा जनशक्ति रक्सी र चुरोटलगायतका कुलतमा लाग्ने क्रम धेरै देखिएकाले भोलि देशमा नेतृत्व गर्ने जनशक्ति अभाव हुन सक्ने भन्दै गोरखामा भएको नवौं केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। ‘सिक्ने, शिक्षा लिने, युवाको जोस जाँगरको उमेरमा अहिले युवाले चुरोट, रक्सी खाएर बिताउने क्रम बढेको छ, यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मगर संघको नवौं बैठकले २५ वर्षभित्रका मगर युवालाई मदिरा बन्देज लगाएको हो’, बैठकको निर्णय सुनाउँदै सदरमुकाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नवीन रोका मगरले भने, ‘जातले पाएको भनेर सानैदेखि रक्सी खानुपर्ने, खुवाउने चलन छ, यसलाई पनि हामी निरुत्साहित गर्ने अभियान चलाउँछौं ।’ अन्य समुदायका युवा
सुरु भयो नायक राजेश हमालले सञ्चालन गर्ने टेलिभिजन शो ‘को बन्छ करोडपति’ , हेर्नुहोस् पहिलो एपिसोडका मृत्युको मुखबाट फर्केपछि १ करोडका लागि राजेश हमालसँग भिडेका भाग्यमानी….(हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौँ – चर्चित टेलिभिजन शो ‘को बन्छ करोडपति’ सुरु भएको छ। ब्रिटेनको चर्चित टेलिभिजन शो ‘हु वान्ट्स टु वि ए मिलेनियर’को नेपाली संस्करण ’को बन्छ करोडपति’शनिबार सुरु भएको हो । यस कार्यक्रमलाइ नायक राजेश हमालले सञ्चालन गरेका छन् ।कार्यक्रमको पहिलो एपिसोड शनिबार एपीवान एचडीबाट प्रसारण भएको छ । यस कार्यक्रम रबीएन मिडियाको सहप्रायोजन रहेको छ । कार्यक्रममा एसएमएसद्वारा प्रतियोगी छानिने र तीमध्ये १० जना प्रतियोगी फस्टेस्ट फिंगरको लागि चुनिनेछन्। कार्यक्रममा चुनिएका १० जना सहभागी हट सिटको लागि प्रतिष्पर्धा गर्नेछन्। तीमध्ये छिटो उत्तर मिलाउने एक जना हट सिटमा पुग्नेछन्। सुरु भयो नायक राजेश हमालले सञ्चालन गर्ने टेलिभिजन शो ‘को बन्छ करोडपति’ , हेर्नुहोस् पहिलो एपिसोडका मृत्युको मुखबाट फर्केपछि १ करोडका लागि राजेश हमालसँग भिडेका भाग्यमानी….हेर्नुहोस् भिडियो…
खुट्टा हालेपछि अब कृष्ण ओली यस्तो हात हाल्दै ! हेर्नुहोस -डाक्टरले यस्तो गर्दैछन् (भिडियो सहित)
काठमाडौं- लामो समयदेखि आफ्ना १ खुट्टा र २ हात विहिन भएर दुखीत जीवन विताइरहेका कृष्ण ओलीको जीवनमा अन्तत : खुसियाली आएको छ । कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण आफ्नो खुट्टाको उपचार गराउन नसकेका कृष्ण ओलीलाई सम्पूर्ण नेपालीले सहयोग गरेर उनको कृतिम खुट्टा जोडिदिएका छन् । लामो समयदेखि कृष्ण ओली र उनकी श्रीमती रुपा ओलीले शिशिर भण्डारीको युटुब च्यानल मार्फत सम्पूर्ण नेपालीमा सहयोगको लागि अपिल गरेका थिए । नभन्दै सबैले आफूले सकेजति सहयोग कृष्णको लागि गरिदिएका छन् । अहिले कृष्ण आफ्नो खुट्टामा टेकेर हिड्न सक्ने भएका छन् । धेरै समयपछि आफ्नो श्रीमान्को खुट्टा जोडिएको देखेर रुपा निकै नै खुसी देखिएकी थिइन् । उनले भावुक हुँदै आफूहरुलाई सहयोग गर्ने नेपाली जनतालाई धन्यवाद पनि दिइन् । चिकित्सकले अहिले नै कृष्णले हिड्न नहुने बताएका छन् । उनले भर्खरै मात्र उनको उपचार भएकाले केहिसमय उनले आफ्नो खुट्टालाई आराम दिन
विवादित हुँदा पनि युवामाझ किन लोकप्रिय छ गोर्खा भर्ती ? भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस यस्तो रहेछ कारण
बेलायती सेना र त्यस अन्तर्गतको सिंगापुर पुलिसका लागि केन्द्रीय अथवा अन्तिम छनोट प्रक्रिया आउँदो जनवरीदेखि पोखरामा सुरु हुँदैछ। सन् २०१९ का लागि करिब ४०० पदको लागि झन्डै दश हजार नेपाली युवा बेलायती सेनाका लागि भिडिरहेका छन्। अन्तिम छ्नोटअघि प्रतिस्पर्धीहरुले धरान र पोखरामा हुँदै गरेको क्षेत्रीय छनोटमा नाम निकाल्न पर्ने हुन्छ।थोरै पदका लागि धेरै आकांक्षी हुने हुँदा बेलायती सेनामा भर्ती हुन निकै गाह्रो छ। प्रत्येक १०० प्रतिस्पर्धीबाट ४ जना मात्र छानिन्छ्न। शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक रूपमा आफूलार्इ अब्बल प्रमाणित गर्नुपर्ने हुँदा प्रतिस्पर्धीहरु कति आफै कति ट्रेनिङ सेन्टरको सहरा लिएर प्रशिक्षण गर्ने गर्छन्। कुनै समय बाध्यता र अप्ठ्यारोबीच सुरु भएको गोर्खा भर्ती धेरैका लागि आज रहर र समाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। विवादित भएर पनि गोर्खा भर्ती युवामाझ किन यति लोकप्रिय छ त ? नागरिक ३६०
कृष्ण ओली जस्तै पीडित बुद्धिमानलाइ सहयोग लिएर भेट्न पुगे भाग्य न्यौपाने
दैवकाे बज्रपात कति बेला कस्कोमा खस्छ, थाहै हुदैन । बाँकेका बुद्धिमान कुँवर परिवारकै जीवन निर्वाहका लागि १६ बर्षदेखि नै भारतमा मजदुरी गर्दै आइरहेका थिए । विदेशमा काम गर्ने क्रममा बिजुलीकाे बढि भोल्टेजकै कारण एकाएक बुद्धिमानकाे जीवनमा बज्रपात खस्यो । बजुलीकाे करेन्ट लागेपछि अहिले उनकाे दुबै हात र एउटा खुट्टा काटिइसकेकाे छ भने बाँकी एउटा खुट्टा पनि इन्फेक्सन भैरहेका ले उनकाे उपचार निकै जरूरी भएकाे छ। उपचारका लागि भएका केहि जग्गा जमिन पनि बेचिसकेका बुद्धिमानकाे घरकाे अवस्था बिजोग भएकाले उनकाे उपचारका लागि सबै सबैले सहयोग गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दै भाग्य न्याैपानेले तत्कालका लागि एक लाख पचास हजार सहयोग हस्तान्तरण गरेका छन् ।